Kismaayo News » Madaxda Qaranka oo is af-garad dhex maray
Madaxda Qaranka oo is af-garad dhex maray
Kn: Shir mudo todobaad ah u socday madaxda Qaranka ayaa ugu danbayn magaalada Muqdisho lagu soo gabogabeeyay. Dood kulul iyo is jiid jiid dheeraaday kadib waxay madaxda Qaranku ayagoon lagu kala dhex jirin isla gaaraan is af-garad ku dhisan is qancin, isu dabac iyo isla jaan qaadid.
War murtiyeed ka soo baxay shirkii madaxda ayaa qodobada uu xanbaarsanyahay qaar kood si waafi ah u qeexanyihiin, waxaana kamid ah qodobadii qeexayay awoodaha, qaybsiga kheyraadka iyo deeqaha iyo dhisitaanka ciidamada milatariga iyo booliska kuwaasi oo loo saaray gudi isku dhaf ah oo soo qaabeeya. Sidoo kale dib u eegista dastuurka iyo hindise sharciyeedyada ayaa la isku waafaqay in gudi isku dhaf ah ay daraasad ku sameeyaan ka hor inta aan baarlamaanka la hor gaynin.
Hadaba war murtiyeedka ayaa qodabada ugu mihiimsan waxay u qornaayeen sidan;